स्थानीय तहमा यातायात पहुँच
ताप्लेजुङ-“गाउँपालिकामै पहिलो पटक गाडी भित्र्याउँदा हर्षित छौं ।” मिक्वाखोला गाउँपालिका–३ लिवाङका अध्यक्ष दीपेन्द्र लिवाङले भने, “गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडियो । अब दैनिक उपभोग्य सामान गाडीमा ल्याउँछौ, गाडीमा यात्रा गर्छौं ।”
गाउँपालिका प्रवक्तासमेत रहेका लिवाङका अनुसार गाउँपालिकाका ५ वटै वडामा गाडी पुगेको थिएन । गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ खोक्लिङ, वडा नं. ३ लिवाङ, वडा नं.४ साँवा र वडा नं. ५ पापुङका बासिन्दा गाडी चढ्न छिमेकी गाउँपालिका र नगरपालिका तर्नुपथ्र्याे । हिउँदामा स्काभेटर तारेर यी ५वटै वडाका विभिन्न ठाउँमा सडकको ट्रयाक भने खोलिएको थियो । तर गाडी भने गुडेको थिएन ।
गाउँपालिकामा बुधबार गाडी पुगेसँगै सबै स्थानीय तहमा यातायातको पहुँच पुगेको छ । १ नगरपालिकासहित ८ वटै स्थानीय तहमा यातायातको पहुँच पुगेको छ । फुङलिङ नगरपालिकासँग जोडिएको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा तमोर नदीबाट ट्याक्सी र ट्रयाक्टर तारिएको हो । नगरपालिका वडा नं ९ हाङ्देवा र मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ खोक्लिङको थुम्वाबेंसी जोड्ने तमोर नदीमै अस्थायी सडक (ढुंगा र ह्युम पाइप) पुलमाथिबाट गाडी तर्नेबित्तिकै स्थानीयबासी निकै खुसी भए । खोक्लिङका भक्त कार्कीले भने, “ढुक्क भो । गाउँघरमै मोटर सरर !” तमोर नदीमा १२ वटा ह्युम पाइप राखेर तारिएको मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सुरेश थापाले जानकारी दिए । चालक सुवास अधिकारीले बा १४ च ६७२० नम्बरको ट्याक्सी पहिलोपल्ट तारेका थिए । उनलाई स्थानीय मनकामना कृषक समूहले फूलमालाले स्वागत गरे ।
पारिपट्टिको फुङ्लिङ बजारमा मात्रै गाडी देखेका मिक्वाखोलावासी गाउँमा गाडी पुगेसँगै खुसी छन् । बजारसम्म ओहोरदोहोर गर्न, बिरामी पर्दा र गाउँमा फलेका तराकारी, अन्नपात बिक्री गर्न सहज हुने कृषक समूहका प्रकाश थापाले बताए । अब खोक्लिङबाट ४५ मिनेट र लिवाङबाट १ घण्टामा सदरमुकाम आउन सम्भव बनेको छ । पहिले लिवाङबाट हिँडेर आउन ४ घण्टा समय लाग्थ्यो । सदरमुकामसम्म दैनिक सवारी साधन चलाउन र भाडादरबारे छलफल प्रारम्भ गरिएको छ ।
गाडी तारिएको स्थानमा निर्माणाधीन सानीमा हाइड्रोपावरले मोटरेबल पुल निर्माण गरिरहेको छ । दुई महिनाभित्र पुल निर्माण सकिने र त्यतिन्जेल खोलाबाटै सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी छ । गाउँपालिका केन्द्रसम्म भने तत्काल सवारी सञ्चालन हुने अवस्था छैन । लिवाङमा ३ वर्षअघि गएको पहिरो नथामिएका कारण केन्द्र रहेको साँवासम्म सडक पु-याउन नसकिएको गाउँपालिकाका प्रवक्त लिवाङले बताए । यस वर्ष भरि गाउँपालिका केन्द्रसम्म ट्रयाक खोल्ने गरी १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअघि तमोर नदीमै दोभान पुल बनेसँगै आठराई–त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ ।
फुङ्लिङ नगरपालिकाको हाङ्देवा र मिक्वाखोला गाउँपालिकाको खोक्लिङ जोड्ने तमोर नदीमा बनाइएको अस्थायी सडक । तस्बिर ः कारोबार